MediaTek dia hamokatra processeur nanometer 7 amin'ity taona ity | Androidsis
MediaTek no marika mpanodina be mpampiasa indrindra amin'ny fitaovana ambany sy afovoany. Na eo aza izany, ao anatin'ny faritra avo lenta dia taona vitsivitsy miala amin'ny mpifaninana lehibe aminy, Qualcomm. Saingy, ny orinasa Taiwaney dia tsy mikasa ny hilavo lefona ary manohy mampivoatra ny paikadiny ho manakaiky ny mpifaninana aminao.
Ny orinasa dia nahavita fandrosoana betsaka, indrindra tamin'ny fahatongavan'ireo mpikirakira Helio vaovao. Noho izany dia nihena be ny fahasamihafana. SAINGY Ny drafitra MediaTek dia mitranga satria mihena io fahasamihafana io bebe kokoa aza. Satria, ny tetik'asa ataon'izy ireo amin'ity taona ity dia ny hamokarana makarakara 7 nanometer.
Mandritra ny fotoana ela miisa 7 fanampiny chips omena tombony an-tsena. Raha ny marina, ny fitaovana toy ny Galaxy S9 dia antenaina hanana iray. Saingy, toa tsy mbola hitranga io izao (farafaharatsiny miaraka amin'ireo processeur vaovao avy amin'ny Samsung sy Qualcomm). Ny zava-drehetra dia manondro izany ny mitsambikina amin'ny 7 nanometera dia ho sarotra.
Na dia dingana ilaina aza izany. Toa izany Ny MediaTek dia te handray andraikitra amin'izany. Ny orinasa Taiwanese dia efa manomana ny mpikirakira nanometer 7 voalohany ho an'ity taona ity. Ka ity fanovana ity dia aseho amin'ny tondrozotra an'ny orinasa Taiwanese.
Ankoatra izany, ity fanapahan-kevitra ity dia mety ho tena manampy amin'ny MediaTek. Satria mety hisarika fifantohana bebe kokoa ho an'ireo mpikirakira anao ary misy marika marobe ambony sy avo lenta izay te-hiara-hiasa sy hampiasa ny processeur-nao. Ka, fotoana iray tena ilaina io. Satria afaka nanakaiky kokoa ny mpifaninana aminy teo an-tsena izy ireo.
OPPO, Vivo na Sony dia anisan'ny mpanjifa MediaTek sasany. Ka azo antoka ireo orinasa ireo fa faly amin'ity vaovao ity ary miandry fatratra ny processeur vaovao nanometer 7 vaovao. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ny fotoana hahatongavan'izy ireo amin'ny tsena. Tombanana ho mandritra ny taona 2018 izy io, saingy tsy misy daty tokony ho fantatra. Hampahafantatra anao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » MediaTek hamokatra chip nanometera 7 amin'ny taona 2018
Ny Sharp Aquos S3 dia haseho amin'ny volana Janoary, tafaporitsaka ny Aquos S3 Mini